https://soundcloud.com/user-897514358/seena-guddataa-1ffaa Kutaa Tokkoffaa Obbo Qannoo fi aadde Jiituun maatiisaanii jireenyaan giddugaleeyyii ta’anii fi ganda baadiyyaa tokko keessa gargar fagoo jiraatan keessaa, godina Shawaa Bahaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhalatan. Akka aadaa Oromootti ijoollee sirriitti nyaachisanii guddisuun sirriitti beekamaa dha. Haaluma sanaan, obbo Qannoo fi aadde Jiituunis soorattoota qabiyyeen badhaadhoo ta’an kan akka marqaa, caccabsaa, aannanii … Continue reading Seenaa Guddataa (1ffaa)
Naannoo Oromiyaa Godinaalee Arsii, Arsii Lixaa, fi Shawaa Lixaa Gahiinsi beekumsaa fi ogummaan qonnaan bultootaa qonnaa isaanii irraa bu’aa qabeessa ta’uu fi ta’uu dhabuu keessatti murteessaa dha. Kana hojiirraa oolchuuf, beekmsaa fi ogummaa qonnaa isaaniitiif barbaachisu addaan baasuun madda fi tooftaa ittiin babal’isan guddisuun dhimmaa xiyyeffannoo keessaa galuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa “Tarsiimoo Misooma Qonnaan Durfamuun … Continue reading Oogummaa qonnaa guddisuu fi tooftaa gahiinsa Oomisha moose fi garbuu biiraa
Karaa Garaatti Hafte
Dur- duri akkas jedhani Sangoota sadi ta’anii Waliin manaa ba’anii Deemutti ka’anii Karaarra bu’anii Bifti isaanii addaddaadha Sangaan tokko adiidha Kan lammataa gurraacha Inni sadaffaan daalacha Isaanii deemaa jiruu Waraabuu beela’ee jooruu Guyyaan walitti fide Waraabuus gammadee Daba garaatti yaadee! Itti siiqee nagaa gaafatee Iddoo deeman qoratee Tokkummaa isaanii sodaatee Mala salphaa filatee Gargar baasuuf … Continue reading Karaa Garaatti Hafte